ကြည့်လိုက်တိုင်း နှစ်ထပ်မြင်နေတယ် ဆရာ (Double Vision) – Healthy Life Journal
—၊ ပါမောက္ခဦးတင်ဝင်း (မျက်စိအထူးကု ဆရာဝန်ကြီး) ပါမောက္ခ၊ ဌာနမှူး ရန်ကုန်မျက်စိဆေးရုံကြီးနှင့် တွေ့ဆုံဆွေးနွေးခြင်း ၊—
Q. မျက်စိက ကြည့်လိုက်တိုင်း နှစ်ထပ်မြင်နေပါတယ်။ အဲဒါ ဘာကြောင့် ဖြစ်ရတာပါလဲ၊ နှစ်ထပ်မြင်တာက ရောဂါကြောင့်ဖြစ်ရတာလား။ ကုသလို့ရနိုင်ပါသလားဆရာ။
A. မျက်စိက ကြည့်လိုက်လို့ နှစ်ထပ်မြင်နေတာ (Double Vision)ကို Diplopia လို့လည်း ခေါ်ပါတယ်။ နှစ်ထပ်မြင်တဲ့ အနေအထားမှာ မျက်လုံးတစ်ဖက်တည်းကနေ နှစ်ထပ်မြင်တာ (Monocular Diplopia)နဲ့ မျက်လုံးနှစ်လုံးလုံးကနေ နှစ်ထပ်မြင်တာ (Binocula Diplopia) ဆိုပြီး နှစ်မျိုးရှိပါတယ်။
မျက်လုံးတစ်ဖက်တည်းကနေ နှစ်ထပ်မြင်တာနဲ့ နှစ်ဖက်စလုံးက နှစ်ထပ်မြင်တာမှာ ဖြစ်ရတဲ့ အကြောင်းရင်းချင်းက မတူပါဘူး။ မျက်လုံးတစ်ဖက်တည်းကနေ နှစ်ထပ်မြင်နေတယ်ဆိုရင် ဒါက အတွင်းတိမ်ရောဂါ (Cataract) ကြောင့် ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ ပြီးတော့ ဆလင်ဒါပါဝါ သိပ်များနေတဲ့ အခြေအနေ(High Astigmatism)ကြောင့်လည်း ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။
“လူနာတစ်ယောက်က နှစ်ထပ်မြင်လို့ လာပြပြီဆိုရင် အကြောင်းရင်းကို ရှာရပါတယ်။ မျက်စိနှစ်ဖက်စလုံး နှစ်ထပ်မြင်နေတယ်ဆိုရင် ကြွက်သားကိုတည့်အောင် ပြန်လုပ်ပေးရပါတယ်။ လုပ်တဲ့နည်းကလည်း ခွဲစိတ်ကုသတဲ့နည်းပဲ ရှိပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ လူနာတစ်ယောက် နှစ်ထပ်မြင်လို့ ရောက်လာတယ်ဆိုပေမယ့် ချက်ချင်းတော့ ခွဲစိတ်ကုသမှုမပြုပါဘူး” . . .
မျက်လုံးနှစ်ဖက်စလုံးက နှစ်ထပ်မြင်နေတယ်ဆိုရင်တော့ နာ့ဗ်ကြော 3th၊ 4th နဲ့ 6th နေရာတွေမှာ Nerve Palsy ဖြစ်သွားတာကြောင့် ကြွက်သားတွေ ဟန်ချက်မညီတာမျိုးဖြစ်ပြီး နှစ်ထပ်မြင်တာမျိုး ဖြစ်တတ်ပါတယ်။
ဥပမာအားဖြင့် မျက်စိနှစ်ဖက်စလုံးက ပုံရိပ်တစ်ခုကို ကြည့်တဲ့အခါ တစ်ဖက်ကကြည့်တယ်၊ အလားတူ နောက်တစ်ဖက်ကလည်း ကြည့်တယ်.. မျက်စိနှစ်ဖက်စလုံးက မြင်ရတဲ့ အဲဒီပုံရိပ်နှစ်ခုစလုံးကို တစ်ထပ်တည်းဖြစ်အောင် လုပ်ပေးပါတယ်။ အဲဒီလို တစ်ထပ်တည်းမဖြစ်ဘဲ ပုံရိပ်က နှစ်ခုဖြစ်ပြီး နှစ်ထပ်မြင်ရတဲ့အခါ ကြွက်သားတွေက ဟန်ချက်မညီတာမျိုး ဖြစ်နေလို့ပါ။ ဒါက နာ့ဗ်ကြောဆိုင်ရာ ဝေဒ နာ(Nerve Palsy) ကြောင့် ဖြစ်တတ်ပါတယ်။
လူနာတစ်ယောက်က နှစ်ထပ်မြင်လို့ လာပြပြီဆိုရင် အကြောင်းရင်းကို ရှာရပါတယ်။ မျက်စိနှစ်ဖက်စလုံး နှစ်ထပ်မြင်နေတယ်ဆိုရင် ကြွက်သားကို တည့်အောင်ပြန်လုပ်ပေးရပါတယ်။ လုပ်တဲ့နည်းကလည်း ခွဲစိတ်ကုသတဲ့နည်းပဲ ရှိပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ လူနာတစ်ယောက် နှစ်ထပ်မြင်လို့ ရောက်လာတယ်ဆိုပေမယ့် ချက်ချင်းတော့ ခွဲစိတ်ကုသမှု မပြုပါဘူး။ အနည်းဆုံး ခြောက်လလောက် စောင့်ရပါတယ်။ ဒီစောင့်နေတဲ့ ကာလအတွင်း သူ့အလိုလို ပြန်ကောင်းချင်လည်း ကောင်းနိုင်ပါတယ်။ အဲဒီလို မကောင်းဘူးဆိုရင်တော့ ကြွက်သားတွေကို ခွဲစိတ်ကုသမှု ပြုလုပ်ရပါတယ်။ ပြီးရင် Prism ထည့်ပေးလိုက်ပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ အခုနောက်ပိုင်းမှာ Prism ထည့်တာ ရှားသွားပါပြီ။ မျက်မှန်တွေပဲ တပ်တာများပါတယ်။
လူနာအများစုက နှစ်ထပ်မြင်ပြီဆိုရင် ကြောက်ကြတာများပါတယ်။ တကယ်က နှစ်ထပ်မြင်တာက ရောဂါမဟုတ်ပါဘူး။ ရောဂါလက္ခဏာတစ်ရပ်ပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် အကြောင်းရင်းကို သိအောင်ရှာပြီး ကုရတာဖြစ်ပါတယ်။ အကြောင်းရင်းက Nerve Palsy ကြောင့် ဖြစ်တယ်ဆိုရင် 3th၊ 4th နဲ့ 6th နာ့ဗ်တွေအားလုံးက ဦးနှောက် Stem ကနေ ထွက်လာတာဖြစ်ပါတယ်။ ဒီမှာ မျက်စိကြွက်သားတွေအထိ လာတဲ့လမ်းကြောင်းတစ်လျှောက်လုံး ဘယ်နေရာမှာ ထိခိုက်တာလဲဆိုတာကို ရှာရပါတယ်။ ဥပမာ- သွေးကြောတွေမှာ ဖောင်းကားနေတာကြောင့် ဖြစ်တာလား၊ အကျိတ်ရှိလို့ ဖြစ်တာလား..စသဖြင့် အကြောင်းရင်းကို တိတိကျကျသိအောင် ရှာရပါတယ်။ ဒီအခြေအနေတွေက အသက်အန္တရာယ်ကို ထိခိုက်စေနိုင်တဲ့ အခြေအနေတွေလည်း ဖြစ်နေပါတယ်။ ဒါကြောင့် နှစ်ထပ်မြင်ပြီဆိုရင် နှစ်ထပ်မြင်တဲ့လက္ခဏာ တစ်ခုတည်းကိုပဲ ကုသနေလို့မရပါဘူး။ နှစ်ထပ်မြင်ရတဲ့ အကြောင်းရင်းကို တိတိကျကျသိအောင် ကုသဖို့ လိုပါတယ်။ အကြောင်းရင်းကိုသိအောင် လိုအပ်ရင် CT Scan ရိုက်တာ၊ MRI ရိုက်ပြီး စစ်ဆေးတာတို့ကို ပြုလုပ်လို့ ရပါတယ်။
ဒါတွေနဲ့ စမ်းသပ်စစ်ဆေးကြည့်လိုက်လို့ အသက်အန္တရာယ် ထိခိုက်စေတဲ့ အခြေအနေတွေ မဟုတ်ဘူးဆိုရင် ဆီးချိုရောဂါရှိသလား၊ သွေးတိုးရောဂါရှိသလား စတဲ့ အထွေထွေကျန်းမာရေးအခြေအနေကို စစ်ဆေးရပါတယ်။ ဘာအကြောင်းရင်းမှ မရှိတော့ဘူးဆိုရင်တော့ ခြောက်လလောက် စောင့်ကြည့်ရပါတယ်။ ခြောက်လလောက် စောင့်ကြည့်လို့မှ မျက်စိကြွက်သားတွေက သူ့အလိုလို မတည့်ဘူးဆိုရင် ခွဲစိတ်ကုသမှု ပေးရပါတယ်။
နှစ်ထပ်မြင်တာက အဖြစ်များတဲ့ လက္ခဏာတစ်ရပ်ဖြစ်ပါတယ်။ လူငယ်တွေဖြစ်သလို လူကြီးတွေလည်း အဖြစ်များပါတယ်။ နှစ်ထပ်မြင်တာမဖြစ်အောင် ကာကွယ်လို့လည်း မရပါဘူး။
Related Items:double vision, Eye Care, medical knowledge